Raashiyaan Yunaayitid Isteetis Lakkoobsa Diplomaatota Ishee Kan Biyya Ishee Gad Xiqqeessi Jechuun Ajajje
US uggura isheen Raashiyaa irra akka kaa’amuuf kongresii biyya isheen kaleessa raggaasisteef deebii kennuuf jecha Raashiyaan tarkaanfii kan fudhattu ta’uu ministriin dhimma alaa biyyattii beeksisee jira.
Ministrichi akka jedhetti uggurri Ameerikaan keesse abbaa irrummaa hamaa kan US dhimma sadarkaa addunyaa keessa seenuu ti.
Ibsi sun akka jedhutti Ameerikaan lakkoobsa diplomaatotaa fi hojjettoota embasii Mooskoo fi qoonsiilaa keessa jiranii qixxee diplomaatotaa fi hojjettoota embasii Raashiyaa kan US keessa jiraniin akka qixxeessitu gaafanna jedha.
Raashiyaan akka jettutti lakkoobsi kun gad xiqqaachuun lakkoobsa diploomaatota Ameerikaa fi hojjettoota gamasii gara 455tti gad buta, kunis hanga xumura baatii Hagayyaatti xumuramuu qaba jetti.
Kanatti dabaluu dhaan embasiin US kan Raashiyaa keessa jiru kuusaa meeshaalee kan Mooskoo keessaa fi bakka bashannanaa Sere-bryany Bor akka hin seenne nan uggura jette.
Angawoonni ministriin dhimma alaa US yaadachiisa mootummaa Raashiyaa arganneerra jedhan. seera tumtoonni Ameerikaa kaleessa Raashiyaa qofa utuu hin taane Iraan fi Kooriyaa Kaabaa irra uggura haaraa kaa’uuf walii galan.
Kooriyaa Kaabaa Miaaylia Ka Biroo Furguggifte
Labsiin Yeroo Hatattamaa Ammas Dheerachuu Hin Qabu: Semaayaawii Paartii
Musliimonni Jerusaaleem Israa’el Tarkaanfii Nageenyaa Fudhatte Kaasuutti Gammadan